Al-Shabaab oo markii u horeysay war ka soo saartay doorashada Madaxweyne Farmaajo – STAR FM SOMALIA
Al-Shabaab oo markii u horeysay war ka soo saartay doorashada Madaxweyne Farmaajo
Xarakada Al-Shabaab ayaa markii u horeysay war ka soo saartay doorashada Maxamed C/llaahi Farmaajo oo 8-dii bishan loo doortay Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Sheekh Xasan Yacquub oo ka mid ah Saraakiisha sar sare ee Al-Shabaab, ahna Guddoomiyaha Al-Shabaab u qaabilsan Galgaduud ayaa sheegay in Farmaajo uu la mid yahay Madaxdii hore u soo maray dowladda Federaalka, isla markaana uu ka daran yahay.
“Farmaajo waxba kama duwana madaxdii hore, balse waaba uu ka sii daran yahay, waa midka ugu sharta badan”ayuu yiri Sheekh Xasan Yacquub.
Waxaa uu sheegay in afarta sano ee u hartay Farmaajo ay la dagaalamayaan, isagoo uga digay shacabka inay ku kadsoomaan sida uu yiri.
“Waxaab rabnaa inaan sheegno in aysan Muslimiinta ku kadsoomin, waa in ay ogaadaan waxa is bedelaya waa gaal degaya iyo gaal imaanaya, kuwii hore waxay dhihi jireen waxaan ka shaqeynaynaa danta dalka dadka iyo diinta, balse Farmaajo Tabeelihiisa waxaa ugu qoran danta dalka iyo dadka wuxuu yiri wax diin layiraahdo iga fogeeya”ayuu yiri Xasan Yacquub.
Mar uu ka hadlayay isu soo baxyadii lagu taageerayay Farmaajo uu ahaa mid ay soo abaabuleen NGO dhaqaale lagu siiyay buun buuninta mashruuciisa cusub sida uu yiri.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay in in dowladda Farmaajo ay ula dagaalami doonaan sidii ay ula dagaalameen dowladihii ay madaxda ka ahaayeen C/llaahi Yuusuf, Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh maxamuud.
Taliye ku xigeenka ciidanka NISA oo ka hadlay xaalada ciidanka iyo wax yaabaha ay u baahanyihiin
Kenya oo gacanta ku dhigtay wiil iyo gabar Daacish lala xiriiriyay